သရဏဂုံအစွမ်းကြောင့် စုန်းပြုစားခံရမည့်ဘေးက လွတ်လာတဲ့ မြင်ကွန်းမြို့နယ် ဘေကင်စမ်းရွာက ဆီဆုံဆရာကြီး ဆရာကျင်အကြောင်း… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » သရဏဂုံအစွမ်းကြောင့် စုန်းပြုစားခံရမည့်ဘေးက လွတ်လာတဲ့ မြင်ကွန်းမြို့နယ် ဘေကင်စမ်းရွာက ဆီဆုံဆရာကြီး ဆရာကျင်အကြောင်း…
သရဏဂုံအစွမ်းကြောင့် စုန်းပြုစားခံရမည့်ဘေးက လွတ်လာတဲ့ မြင်ကွန်းမြို့နယ် ဘေကင်စမ်းရွာက ဆီဆုံဆရာကြီး ဆရာကျင်အကြောင်း…
Posted by lu ta lone on Apr 28, 2010 in Buddhism, Other - Non Channelized, Science & Religion | 23 comments
ဆင်းရဲသားတို့၏ထွက်ပေါက်... ဘာသာရေး... လူတလုံး အာဘော်... သရဏဂုံအစွမ်းကြောင့် စုန်းပြုစားခံရမည့်ဘေးက လွတ်လာတဲ့ မြင်ကွန်းမြို့နယ် ဘေကင်စမ်းရွာက ဆီဆုံဆရာကြီး ဆရာကျင်အကြောင်း...
ဆရာကျင်ဟာ ဆီဆုံတွေလုပ်ပြီးရောင်းတယ်။ တစ်ရက်တော့မြို့ပေါ်က မှာထားတဲ့ ဆီဆုံတစ်ခု ပို့လိုက်တယ်။ ဆီဆုံပို့ပြီး ငွေယူရအောင်သွားတော့ ဆီဆုံဝယ်တဲ့ မြို့ပေါ်က လင်မယားက မတန်တဆ ဈေးနှိမ်တယ်…ဒါကြောင့် ကတောက်ကဆ စကားပြောရတာပေါ့ ။ ဒါပေမဲ့ ဆရာကျင်ဘက်ကမှန်တော့ တန်ဘိုးအပြည့်အ၀ရတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ ထုံးစံအတိုင်း ပိုက်ဆံရှင်းပြီးတော့ အိမ်ရှင်လင်မယားက ဆရာကျင်ကို ထမင်းကျွေးတယ်။ ဆရာကျင်ကလည်း ထုံးစံအတိုင်း သရဏဂုံလေးဆောက်တည်ပြီး ပထမထမင်းလုပ် ၀ါးပြီးမျိုချတယ် အဲဒီမှာတင် ထမင်းလုပ်ဟာ လည်ချောင်းဝမှာ တစ်နေတယ်။ ဒါအန္တရာယ်ပဲလို့ သူ့စိတ်က အလိုလိုသိတယ်။ ဒါနဲ့ အိမ်အပြင်သွားပြီးတော့ အာခေါင်ကို လက်နဲ့ လက်ညိုးထိုးအန်ချလိုက်တော့ ကြွက်အသေကောင်ကြီးထွက်လာတယ် ဒါစုန်းပညာနဲ့သူ့ကို သေအောင်သတ်တာပဲလို့သိလိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆရာကျင်ကမသေဘူးလေ။ အိမ်ရှင်လင်မယားကလည်း မျက်နှာပျက်နေတယ် သူတို့လုပ်ထားတာကို။ ဒါနဲ့ဆရာကျင်က ထမင်းဆက်မစားတော့ပဲ ရွာပြန်လာတယ်။ နောက်နေ့ကျတော့ အဲဒီအမျိုးသမီးက နောက်ကနေကန်တော့ပွဲနဲ့ လိုက်လာတယ်။ ကန်တော့တောင်းပန်တယ် ကျွန်မဟာမသင်ပဲနဲ့တတ်နေတဲ့ ၀မ်းတွင်းစုန်းပါ အခုဆိုးကျိုးတွေကိုသိလို့ ဘုရားရှင်ရှေ့မှာ ဒီပညာတွေ အပြီးတိုင်စွန့်လွှတ်လိုက်ပါပြီ။ ဘယ်တော့မှလည်း အသုံးမပြုတော့ပါဘူး။ ဆရာကျင်ကလည်း ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါတယ်။ ခွင့်လွှတ်ရင် ကျွန်မတစ်ခုလောက်သိပါရစေ။ ကျွန်မမကျေနပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင် ဒီနည်းနဲ့ သတ်တာ သေသွားကြတယ်။ ဦးကြီးကျမှ မသေဘူး ဦးကြီးဘာဂိုဏ်းတွေဝင်ထားလဲမေးတော့ ဦးကြီးက ဘာဂိုဏ်းမှလည်းမ၀င်ဘူး ဘာဆေးမှလည်းမထိုးဘူး ဦးကြီးဟာ ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေ သင်ပေးထားလို့ ငယ်ငယ်ကတည်းက အစာစားခါနီးတိုင်း သရဏဂုံရွတ်တယ် အဲလိုရွတ်ရင် အန္တရာယ်လည်းကင်းတယ် ဘေးလည်းရှင်းတယ်၊ သူများပြုစားလို့ မရဘူး ကုသိုလ်လည်းရတယ်။ သရဏဂုံရွတ်ရင် အနက်အဓိပ္ပါယ် သေချာသိဖို့လိုတယ်။ အစာစားခါနီးတိုင်း သရဏဂုံရွတ်ပြီးစားရင် အမျိုးသမီးတွေပိုပြီးကုသိုလ်ရမယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူတို့က ပါးစပ်နဲ့ အစားနဲ့ ပြတ်မှမပြတ်တာကို………
လူတလုံးတော့ ကြုံဖူးဘူး… ဒါပေမဲ့ ရှိမှန်းတော့ သိတယ်… ဗဟုသုတပေါ့ဗျာ… စားခါနီး သရဏဂုံရွတ်တာ အပန်းတော့ ကြီးပါဘူးနော့…
စုန်းကြောက်လို့မဟုတ်လဲ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ သရဏဂုံမြဲသင့်ပါတယ်
သရဏဂုံတည်လို့ သေဘေးကနေလွတ်တဲ့လူတွေ ရှိပါတယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းက ကာတွန်းထဲမှာ သရဏဂုံရွတ်လို့ ဘီလူးစားခံရမယ့်ကိန်းကနေ လွတ်တာကိုလည်းဖတ်ဖူးတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သရဏဂုံလေး ရွတ်တော့ ကောင်းတာပေ့ါ။
စုန်းဆိုတာ တကယ်ရှိတယ် မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ဘဲ ကြောက်စရာကောင်းတယ်။ ကံနိမ့်မှဘဲလုပ်လို့ရတာပါ ….ကံမနိမ့်အောင်လို့ ဘုရားတရားမြဲရမယ် ဒါဆိုအရာအားလုံးကို ကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့..။
ဆင်းရဲသားတို့၏ထွက်ပေါက် blog post ကကျန်တာကိုလည်းဆက်လက်ဖော်ပြပါအုံး။
ဆင်းရဲသားတို့၏ ထွက်ပေါက်အမည်ရှိသော တရားမှ ဆရာတော် အရှင်ဇ၀နဟောကြားတာကိုဖော်ပြတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အခုရော ၀မ်းတွင်းစုန်းတွေရှိသေးတာပဲလား ။
when i read this post. i so afraid then i already decided i never eat from other. thank for this mail.
စုန်း ရှိလား မရှိလားတော့ မသိဘူးဗျာ… တစ်ခါမှတော့ မကြုံဖူးသေးဘူး… ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဗဟုသုတ ရပါတယ်…
Absolutely agree that article cuz me too skip the adversities by reciting “tha-ra-na-gon.” …. i am honestly saying that my life become easy (usually full of unpleasant in the past) and most of my wish were usually fulfilled after i keep reciting “tha-ra-na-gon” with true reverence of only Buddha,Dhamma and Sangha … i think every Buddhists should keep reciting “tha-ra-na-gon” not because we are afraid of Wizard skills ,but because we are the real Buddhists…..
DD lay says:
စုန်း တကယ် ရှိပါတယ်။ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ကို မြင်ဖူးတာမို့မှာ။ အဒေါ် တစ်ယောက်ကို စုန်း အပြု စား ခံထားရလို့။ ဆရာမ တစ်ယောက်ဆီကို သွားမေးတဲ့ အချိန်တုန်းကပါ။
အဒေါ့် ကို ဆံပင်ဖြေချ ခိုင်းတယ်။ ခဏနေ တော့ ခန္ဓာ ကိုယ်ကြီးက လှုပ်လာတယ်။ ခဏနေတော့ သူ လုပ်ထားတယ် ဆိုတာတွေ အားလုံးကို ပြောပြတော့တာပဲ။
လုပ်ထားတဲ့ သူနာမည် အပြည့်အစုံကိုရော ဘာကြောင့် လုပ်တယ် ဆိုတာကို ပါ ပြောပြပါတယ်။ အဲလို ကိုယ်တွေ့ မြင်ဖူးတော့မှပဲ ဒါတွေဟာ တကယ် ရှိတယ် ဆိုတာကို အသေအချာ သိတော့တာပါ။
ဒါကြောင့် ဟုတ်ပါတယ်။ အစား စားခါနီး သရဏဂုံ ရွတ်စားရင် ကောင်းပါတယ်။ ကိုယ့်ကို ချစ်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် မုန်းလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အပြု စား မခံ ရတော့ဘူးပေါ့။
One twin sone so tar da kal shi par tal . example – harry potter pop .
စုန်းကဝေ အောက်လမ်းတွေက အစားနဲ့မှ မဟုတ်ဘူး အငွေ့နဲ့ လည်း တိုက်လို့ရတယ် တကယ်ဆိုရင်လည်း ကိုယ်က အမြဲ သရဏဂုံတည် နိုင်မှ တော်ကာကျမယ်။ ကောင်းကံတွေဘဲ လုပ်တဲ့ သူအဖို့တော့ ဘာမှ ကြောက်စရာ မလိုပါဘူး။ တခါတလေ လုပ်တဲ့ လူဆီတောင် ပြန်သွားထိတတ်သေးတယ်
သရဏဂုံ ကိုတော့ တည်သင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်
impossible but ….
ကိုယ့်တွေမမြင်ဘူးသော်ညား မယုံဘူး..မပြောလို.။ မကြုံဘူးသော်ညား.. အမှန်တစ်ကယ်ရှိနေသည်များ လောကတွင် ရှိမည်….
သို့ သော် ယခုပိုစ့်ကို အမှန်တစ်ကယ်အဖြစ်အပျက်ထက်… ပုံပြင်တစ်ခုအဖြစ်သာပိုမြင်မိသည်…
ဘာသာရေးနှင့် ယခုကိစ္စများကိုလဲ.. ယှဉ်တွဲမမြင်စေလို… ဗုဒ္ဒဘုရားရှင်ဟောခဲ့သည်မှာ တရားတော်များသာ… စုန်းကဝေ အောက်လမ်းနိုင်သည့် ဂါထာမန္တာန်များ မပါ…
It is better to precite (say) right sound.(Eg. Boke Dammmm.( long voice of “M” sound)/// Tha ya nammmmm..Git Sarrrrrrrr (long voice of “r”) Mi. I think that is more powerfull and get something for mind.Test now!!!
I’ve read that story.It’s written By ဆရာတော် အရှင်ဇ၀န.It’satrue story.I suggest everyone should သရဏဂုံ ကိုတော့ တည်သင့်တယ်
ယေရှူ့ တစ်ပါးဘဲကယ်တင်နိုင်ပါသည်။(ကိုယ်တွေ့ သိထားတာကိုပြောပြခြင်းပါ)
သိပ်အစွဲကြီးလွန်းရင် ညအိပ်တဲ့အခါ စည်းချအိပ်တာတို့ ဘာလုပ်လုပ် မန္တာန်ရွတ်တာတို့ လွန်လွန်ကျူးကျူးလုပ်မိတတ်တယ်။ လူမပြောနဲ့ ဘုန်းကြီးထဲမှတောင် အဲသလို အယုံအကြည်လွန်ဒါရှိဒယ်။ ဆရာသမားများ ဆုံးမလို့ စွန့်လွှတ်လိုက်သူများရှိသလို အဲဒီနောက်ဖက်တွယ်လိုက်သူများလည်း မနည်းဘူး။ သရဏဂုံလိုမျိုး ရွတ်တာကတော့ မမှားနိုင်ထင်ပါတယ်။ သို့ပေသိ လူဆိုဒါ တနေရာထဲ ရပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ ဒါနဲ့ပဲ ပိုစွမ်းတယ်ထင်တဲ့ လောကီအစီအရင်တွေနောက် ပါသွားတယ်။ ကိုယ်နဲ့လည်းကိုက်နေရင် ပြီးရော… ထိန်းမရတော့ဘူး..။ လောကီအစီအရင်ဆိုတာ သူ့ထက်သူ လူစွမ်းဂေါင်းတွေ… တရားသေအားကိုးလို့ မဖြစ်ဘူး..။ သိပ်အားကိုးရင် သရဏဂုံဆိုပေမဲ့ သရဏဂုံပျက်တတ်တယ်။ ထင်ရှားတဲ့ ဆရာတော်တပါးပြောတာ ကြားဖူးတယ်..နယ်တခုအားကိုးသုံးတဲ့ ရေတွင်းမသန့်ဖြစ်လို့ ဒုက္ခရောက်ချိန် ဘာသာခြား ဘုန်းကြီးတပါးလာပြီး ဂါထာမန်းမှုတ်ပေးလိုက်တာ သန့်သွားလို့ အဲဒီရွာလုံးကျွတ် ဘာသာပြောင်းသွားဒယ်။ ကျနော်တို့ ယုံကြည်မှုအရပြောရင်တော့ သူ့တို့ကံပါလာလို့ ဖြစ်ကုန်ဂျတာပေါ့နော်။ သို့သော် ပစ္စုပ္ပန်ကိုပဲကြည့်ရင် တန်ခိုးအိဓ္ဓိပါတ်ကို အားကိုးလွန်းလို့… လိုအပ်ချိန်မှာ သရဏဂုံဂါထာမကယ်၊ ကိုးကွယ်ရာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းကြီးမစွမ်းနိုင်တော့ လက်တွေ့တန်ခိုးပြရာနောက် လိုက်ကုန်တာ။ ဒါကြောင့်လည်း ဗုဒ္ဓက တန်ခိုးမပြဖို့ တားမြစ်ခဲ့တယ်။ ဆရာတော်ကြီးများကလည်း သမထစွမ်းအင်ကို တရားတက်ဖို့သာ အသုံးချခိုင်းကြတာ..။
ရှမ်းပြည်ဘက်တွေမှာ နေခဲ့ဖူးတော့ ဒါတွေတကယ်ရှိနေတာ…သိပါတယ်..။ ဒါကြောင့် သူတို့ ကျွေးတာတွေကို သိပ်မစားရဲဘူး…။ လက်ဖက်သုပ်ထဲ ထည့်ကျွေးတာတွေ၊ ယောကျာင်္တွေ သူတို့ကို စွဲစေချင်ရင် ကွမ်းယာထဲ (မရိုမသေ) မိန်းမကိုယ်က အညစ်အကြေးတွေထည့်ကျွေးတာတွေ၊ ကိုယ်မကျေနပ်တဲ့လူရဲ့ဆံပင်ကို ငါးအမြှီးမှာ ချည်ပြီးအဲ့ငါးကို ရေထဲလွှတ်ရင် အဲ့ဒီလူရူးတယ်ဆိုတွေ အစုံပါပဲ…။ သူတို့ အချင်းချင်း လပြည့်၊ လကွယ်ညတွေမှာ ပညာပြိုင်ကြတယ်၊ စုန်းတောက်တယ်တို့….။ ရွှေရင်ကျော်တွေလဲ အဲ့ဘက်တွေမှာ ရှိတတ်ပါတယ်…။ အညာဘက်မှာလဲ စုန်းတွေ ရှိတယ်…။ ၀မ်းတွင်းစုန်းကတော့ အထက်မြက်ဆုံးပါပဲ…။ သူက ပါရမီစီးလာတာလေ…။
အမလေး ကြောက်ဆရာကြီး အခိုင်တို့ကအစားဆိုသိပ်ငမ်းတာ နောက်ဆိုဆင်ခြင်မှ ၀မ်းတွင်းစုန်းနဲ့ တွေ့ရင် မလွယ်ဘူး ………